Pierre-Emerick Aubameyang oo shaaca ka qaaday halka uu ka ciyaari doono kal ciyaareedka cusub – Gool FM
Pierre-Emerick Aubameyang oo shaaca ka qaaday halka uu ka ciyaari doono kal ciyaareedka cusub
(Dortmund) 06 Agoosto 2017. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa la hadal hayay inuu noqonayo badelka suuro galka ah ee Diego Costa, sidoo kale waxaa waqti dheer lala xiriirinayay inuu Liverpool kula midoobi doono tababarihiisii hore ee Jurge Klopp, waxaana sidoo kale la isla dhex qaadayay inay xiiseynayso kooxda baryahan beesada la wareegeysa ee AC Milan.
Yeelkeede, dhaliyaha reer Gabon kaa oo gool dhaliyay kulankii ay xalay Bayern Munich rigoorooyinka uga qaadeen Borussia Dortmund Germany Super Cup ayaa sheegay in kooxaha wada xiiseynaya aysan midkood dalab rasmi ah soo gudbin sidaa darteed uu la sii joogi doono kooxdiisa Dortmund.
“Ma jiro qof sheegi kara waxa uu mustaqbalka xambaarsan yahay. Waa dhab inaan la hadlay kooxdeyda BVB ka hor inta aan fasaxa galin.”. Aubameyang ayaa sidaa u sheegay Welt Am Sunday.
“Waxaan u sheegay waxa aan aaminsanahay. Laga yaabee inaan markale isku dayayo inaan isku dayo wax kale. Wuxuu ahaa wada hadalo furan oona cadaalad ah aan la yeeshay Michael Zorc iyo Hans-Joachim Watzke.
“Laakiiin isbadel ma aysan sameyn karin midkood kooxaha i doonayay. Sidaa darteed halkan ayaan sii joogi doonaa. Aad ayaana u jeclahay sii joogista halkan, Waxaan Dortmund u dareemaa si hoygeyga oo kale.”.
Aubameyang ayaa sidoo kale xaqiijiyay inuu dalab aan innaba caadi ahayn ka helay horyaalka Shiinaha, kaa oo la warinayo inuu ka dhigi karay laacibka ugu mushaarka badan kubbada cagta adduunka, balse uu iska diiday.
Milan oo €70 milyan oo euro & laba laacib u bandhigtay Andrea Belotti (Jawaabta Torino)
WAR CUSUB: Barcelona oo Talaadada soo bandhigi karta Philippe Coutinho